ဓာတ်ပုံထဲတွင်အနက်ရောင်အစက်နှင့်အစေ့များပါ ၀ င်သည့်အဘယ်သို့သောအသီးများသို့မဟုတ်သစ်သီးများ? စိတ်အားထက်သန်သောအသီး) နဂါးမျက်လုံး (ပဟေayaာ၊ ပတ္တရာ၊ လွန်းယန်း၊ နဂါးမောက်သီး၊ ပိတောက်) ။ နဂါး၏မျက်လုံးသည်ရုရှားဗားရှင်း၏အသီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာနာမည်အသီး ...
ဒိုးနတ်နှင့်စတီယာရင်ဘီးတို့၏ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ငါခြားနားချက်ကိုမမြင်ရဘူး တစ် ဦး ကဆီးထူပျော့ပျောင်းသောစတီယာရင်ဘီးဖြစ်ပါတယ်။ Bagel သည် choux pastry (ဒိုးနပ်နည်းသော်လည်းခြောက်သွေ့ခြင်း) မှဖုတ်ထားသောလက်စွပ်ပုံကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။
ကဏန်းချောင်းတွေကဘာတွေလဲ။ ငါးဖြူများပါ ၀ င်သည့်အဖြူရောင်ငါးများမှကဏန်းတစ်ကောင်မျှမထိခိုက်ပါ။ ချက်ပြုတ်နည်းများအများကြီးရှိပါတယ် - ကထုတ်လုပ်သူ၏သြတ္တပ္ပစိတ်ပေါ်မူတည်သည်။ ဆန် ...
ငါးမဖွင့်ဘဲပန်းရောင်ဆော်လမွန်တွင် caviar ရှိမရှိမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။ ကောင်းမွန်သောသဘာဝပန်းရောင်ဆော်လမွန် caviar ကို ၀ ယ်ရန်မခက်ခဲပါကအဘယ်ကြောင့်ဤပြsuchနာများဖြစ်ရကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ဟိုမှာအတူတူပါပဲ ...
Maheev ၏စတော်ဘယ်ရီယိုကိုမည်သူမဆို ၀ ယ်ယူခဲ့ဖူးပါသလား။ Maheev တွင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုများစွာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဆိုဒီယမ်ဘင်နိတ်နှင့်ပိုတက်စီယမ်ဆော့ဘ်ပါဝင်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောကြောပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်စေအကြံပြုပါသည် ...
ငါ့ကိုဓာတုဗေဒအတွက်လိုအပ်သော Lays ချစ်ပ်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုရေးပါ။ ငါ MEGA ဘေကွန်အရသာနှင့်အတူ Lays တစ်ထုပ်ယူလိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဂလိုရာဂရမ်နှုန်း - ၅၁၀ ကီလိုဂရမ်၊ ပရိုတင်းများ - ၆.၅ ဂရမ်၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ် ...
အစစ်အမှန်အနီရောင် caviar ကိုအတုနှင့်မည်သို့ခွဲခြားရမည်နည်း။ အရသာရှိရုံသာမကယေဘုယျအားဖြင့်သူမကိုယ်တိုင်ရရှိသောအရည်အသွေးမြင့် caviar နှင့်စတိုးဆိုင်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင် caviar ပေးမည်နည်း။
ကက်စပီယန် Herring ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။ Caspian anadromous herring (Alosa kessleri) သို့မဟုတ် Kessler's herring, back-back, herring မိသားစုပိုင်ဖြစ်ပြီး Atlantic herring, Pacific herring, sardine နှင့် ...
ကျွန်တော့်ကိုပြောပါရစေ၊ မော်စကိုတွင် ၁ ကီလိုဂရမ်သည်ယခုစျေးကွက်တွင်သဘာဝပျားရည်တစ်ကီလိုဂရမ်မည်မျှရှိသနည်း။ ငါကျဆုံးခြင်းအတွက်ကီလိုဂရမ်လျှင် ၈ ယူရိုနဲ့ဂျာမနီကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ 1 ရူဘယ်ကနေ။ MDA အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ယခု…
ဆိုဒါထည့်လိုက်လျှင်နို့သည်အဘယ်ကြောင့်အချည်းနှီးဖြစ်သွားသနည်း။ နို့မှာပantibိဇီဝဆေးတွေရှိနိုင်တယ်၊ လူတွေကိုကုသဖို့အတွက်သာကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးသမားတွေရှိနိုင်တယ်။ သောကြောင့်…
စျေးသိပ်မကြီးတဲ့၊ အရသာရှိတဲ့ငါးအမျိုးအစားကဘာလဲ။ ကော့ဒ် (ဥပမာအပြာသောအဖြူရောင်) ကုန်ကြမ်းများမှ ၀ တ်လိပ်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်သော herring ။ အလွန်အရသာရှိတဲ့, ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်။ ဟက်ဒက်ခ်ျ ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၁၃ ရူဘယ်ရတယ်။
အမှန်တကယ်သတ္တုတွင်းခွဲခြားရန်။ အတုကနေ "Essentuki" ရေ?
အမှန်တကယ်သတ္တုတွင်းခွဲခြားရန်။ အတုကနေ "Essentuki" ရေ? ကျောက်စရစ်ခဲများသည်တီကောင်အတုများနှင့်မျောပါနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ၄၊ ၆၊ ၁၇ စသည်တို့သည် Essentuki ကိုသွားပြီးဖြောင့်သောက်ပါ။
တစ်ကီလိုဂရမ်သည်လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ရှင်သန်သည့်ရောက်ရေချိုငါးတစ်ကောင်လျှင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ။ 500r ခန့် မနေ့ကစိန့်ပီတာစဘာ့ဂ်မြို့၊ အိုကေမှာ Karelian ရောက်ရေချိုငါးကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ၁ ကီလိုဂရမ်ခန့် - ၁၆၀-၁၇၀ ရူဘယ်လ် / ကီလိုဂရမ် (အသားမတင်ဘဲနော်ဝေးပင်လယ်) ...
ဒါကစာလုံးလေးလုံးပါအစားအစာပါ၊ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲ အမှား !!! ဘီယာငါကဒီကော်ဖီပဲလို့ပြောလိမ့်မယ်။ တစ် ဦး တည်းသာ ... အစားအစာမဟုတ်ပါ ဂျုံ။ ဇီဝသက်ရှိသက်သတ်လွတ်အစားအစာသည် ...
ဟယ်လို.. ။ ချစ်လှစွာသောစားဖိုမှူး။ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ ... ကြံသကြားဓာတ်၏စစ်မှန်မှုကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ အဓိကအားဖြင့်သကြားညိုသည်သကြားပါသောသကြားပါ ၀ င်သည်။ အနက်ရောင် ...
ထုတ်ကုန်များကိုကစော်ဖောက်ခြင်း၊ သေချာပေါက်ကစော်ဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အစာအိမ်မှထုတ်လုပ်သောအစာမစားခြင်းကြောင့်အူအတွင်း၌ကစော်ဖောက်ခြင်းရှိသည်ဟုခံစားမိနိုင်သည်၊ ဥပမာအားကြီးသောကော်ဖီသောက်ပြီးနောက် - ကော်ဖီနှင့်ကက်သလစ်များ၊
ဂေါ်ဖီထုပ်လွှဲသည်ယခုဘယ်လောက်ကျသနည်း။ ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုအလေးချိန်ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ငါတို့မော်စကိုကိုဒေသမှာ ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၅ ရူဘယ်ရှိတယ်။ နေရာတိုင်းရှိရေကန်၏အလေးချိန်ပေါ် မူတည်၍) ကီလိုဂရမ်လျှင်ရူဘယ် ...
စည်သွတ်အစားအစာ၊ ချဉ်ငံများတွင်ရုက္ခဗေဒ၏နိမိတ်လက္ခဏာများမှာအဘယ်နည်း။ သူသည်မည်သို့မည်ပုံပေါ်လွင်ထင်ရှားသနည်း။ နှင့်အရသာရှိရန်ဆရာဝန်များကမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမဆိုပါ။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အက်စစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရက်သောက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်ပါ။
သဘာဝထောပတ်တွင်မည်သည့်အဆီပါဝင်သင့်သနည်း။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထောပတ်သည် GOST 3791 ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအနည်းဆုံး ၈၂.၅% ပါဝင်သောခရင်မ်မှရရှိသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ အပျော်တမ်းရေနံအတွက် 82,5% ...
အဘယ်အစားအစာများတွင်အထီးဟော်မုန်းများပါသနည်း။ ညိုအသားနှင့်ကြက်ဥများသည်တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းများပါ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်ဝတ်မှုန်နှင့်ပျားပေါင်မုန့်များသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ထိရောက်ပါသည်။
61 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 6,818 စက္ကန့်ကျော် Generate ။